ချင်ရွှေဗြန်း - ဝီကီပီးဒီးယား
(ချန်ဆွေပြန် မှ ပြန်ညွှန်းထားသည်)
မွေးသက္ကရာဇ် ၁၂ အောက်တိုဘာ ၁၉၅၀
ပညာရေး အမျိုးသားထိုင်ဝမ်တက္ကသိုလ် LL.B. ဥပဒေ
ကြင်ဖော် ဝူဆူကျိန်း (吳淑珍)
သားသမီး ချန်ရှင့်ယွီ (သမီး၊ 陳幸妤)၊
ချန်ဂျိကျုံး (သား၊ 陳致中)
ချန်ဆွေပြန်（၁၉၅၀ ခုနှစ် အောက်တိုဘာ ၁၂ - ）ထိုင်ဝမ် (台灣) တောင်ပိုင်းဒေသရှိ ထိုင်နန်ခရိုင် (台南縣)၊ ကွမ်းထျန်ကျေးရွာ (官田鄉) ဇာတိဖြစ်ပြီး ၂၀၀၀ ပြည့်နှစ်မှ ၂၀၀၈ ခုနှစ်အထိ တရုတ်သမ္မတနိုင်ငံ၏ (中華民國) ၁၀ ဆက်နှင့် ၁၁ ဆက်မြောက် သမ္မတအဖြစ်ထမ်းရွက်ခဲ့သည်။
ငယ်မည်မှာ အားပြန်ဖြစ်သောကြောင့် ရင်းနှီးဖော်ရွေမှုကို ဖော်ပြသည့်အနေဖြင့် မိမိကိုယ်ကို အားပြန် (阿扁) ဟု ပြောလေ့ရှိသည်။ ထို့ကြောင့်လည်း ထိုင်ဝမ်သတင်းမီဒီယာများက ချန်ဆွေပြန်ဦးဆောင်သည့် တရုတ်သမ္မတနိုင်ငံ (အာအိုစီ) အစိုးရအား အားပြန်အစိုးရဟု ရေးသားဖော်ပြလေ့ရှိကြသည်။
ချန်ဆွေပြန်သည် ထိုင်ဝမ်လူထုမှ တိုက်ရိုက်မဲပေး ရွေးကောက်တင်မြောက်ခဲ့သည့် ဒုတိယမြောက် သမ္မတဖြစ်သည့်အပြင် ပထမဦးဆုံးသော ဒီမိုကရက်တစ်တိုးတက်ရေးပါတီဝင် (民主進步黨) သမ္မတဖြစ်သည်။ ၎င်း၏ သမ္မတသက်တမ်းအတွင်း အမည်နာမတွင် “တရုတ်”ဟုပါသော နိုင်ငံပိုင်လုပ်ငန်းကြီးများ အပါအဝင် အဖွဲ့အစည်းများ ဌာနများ၏ အမည်များအား “ထိုင်ဝမ်”ဟု ပြောင်းလဲခြင်း၊ လက်ရှိထိုင်ဝမ်တွင် ကျင့်သုံးနေသည့် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေသည် (၁၉၄၆ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၂၅ ရက်နေ့ တရုတ်ပြည် နန်ကျင်းမြို့တွင် ကွန်မင်တန်ပါတီမှ အတည်ပြုခဲ့သည်) ထိုင်ဝမ်၏ လက်တွေ့အခြေအနေနှင့် မကိုက်ညီဟုဆိုကာ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေသစ် ရေးဆွဲရေးနှင့် ကုလသမဂ္ဂသို့ ဝင်ရောက်နိုင်ရေးများကို အင်တိုက်အားတိုက် တွန်းအားပေး ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ စီးပွားရေးအပိုင်းတွင် အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံများသို့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရေးနှင့် တရုတ်ပြည်မ၌ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူ ထိုင်ဝမ်စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်များအား အားတက်သရော စီမံထိန်းကွပ်ရေးနှင့် ထိထိရောက်ရောက် ဖွင့်လစ်ပေးရေး မူဝါဒကို (積極管理，有效開放) စွဲကိုင် ကျင့်သုံးခဲ့သည်။
သမ္မတရာထူးသက်တမ်း ကုန်ဆုံးပြီးနောက် အဂတိလိုက်စားမှုနှင့် ငွေခဝါချမှုကြောင့် ၂၀၀၈ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ ၁၂ ရက်နေ့တွင် ထိုင်ပေမြို့နယ်တရားရုံးမှ ထိန်းသိမ်းခြင်းခံရသဖြင့် ချန်ဆွေပြန်သည် အာအိုစီသမိုင်းတွင် ပထမဦးဆုံးအကြိမ် ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံရသည့် သမ္မတဖြစ်သည်။ ၎င်း၏ အဂတိလိုက်စားမှု အပါအဝင် အမှုတွဲ သုံးတွဲအား ၂၀၀၉ ခုနှစ် စက်တင်ဘာ ၁၁ ရက်နေ့တွင် ထိုင်ပေဒစ္စရိတ် တရားရုံးမှ ပထမအဆင့် စီရင်ချက်ချရာတွင် ချန်ဆွေပြန်သည် ပြစ်မှုထင်ရှား၍ ထောင်ဒဏ် တစ်သက်တစ်ကျွန်းနှင့် ဒဏ်ငွေ ထိုင်ဝမ်ဒေါ်လာ သန်း ၂၀၀ ပေးဆောင်ရန် ပြစ်ဒဏ်ချမှတ် ခံရသည့်အပြင် အစိုးရဝန်ထမ်း အခွင့်အရေး (ပင်စင်၊ ရွေးကောက်ပွဲတွင် ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ခွင့် စသည့် အခွင့်အရေးများ) တစ်သက်တာ မခံစားရဟု တရားရုံးမှ တားမြစ်ထားသည်။
ချန်ဆွေပြန်သည် ထိုင်နန်ခရိုင် ကွမ်းထျန်ကျေးရွာတွင် နေထိုင်သည့် လယ်သမားမိသားစုမှ ဆင်းသက်လာသူဖြစ်သည်။  ကျောင်းပညာတွင် ထူးချွန်သည့် ချန်ဆွေပြန်သည် နာမည်ကျော် ထိုင်နန် အထက်တန်းကျောင်းမှ ဂုဏ်ထူးဖြင့် အောင်မြင်ခဲ့ပြီး ၁၉၆၉ ခုနှစ်တွင် ထိုင်ဝမ်တွင် အမှတ်အကောင်းဆုံးရသည့် ကျောင်းသားများသာ တက်ရောက်နိုင်သည့် အမျိုးသား ထိုင်ဝမ်တက္ကသိုလ်တွင် (國立台灣大學) ပညာဆက်လက်ဆည်းပူးခဲ့သည်။ မူလတွင် စီးပွားရေးစီမံခံ့ခွဲမှုကို အဓိကယူခဲ့သော်လည်း တက္ကသိုလ်ပထမနှစ်တွင် ဥပဒေပညာရပ်သို့ လိုင်းပြောင်းခဲ့သည်။ ထိုနှစ်တွင်ပင် ၎င်းသည် ဥပဒေဌာနမှ ထုတ်ဝေသည့် စာစောင်၏ အယ်ဒီတာအဖြစ် တာဝန်ယူခဲ့သည်။ တတိယနှစ်တွင် ရှေ့နေစာမေးပွဲကို အမှတ်အမြင့်ဆုံးဖြင့် အောင်မြင်ခဲ့ကာ ထိုင်ဝမ်တွင် အသက်အငယ်ဆုံး ရှေ့နေတဦး ဖြစ်လာခဲ့သည်။ ၁၉၇၄ ခုနှစ်တွင် ဥပဒေဘွဲ့ကို ရရှိခဲ့သည်။
↑ McCarthy, Terry "Profile ofaPresident", Time Asia, 3/27/2000
↑ Taiwan Quick Take: Chen's son graduates, again, Taipei Times, 2006-05-15. Retrieved on 2006-10-22.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ချင်ရွှေဗြန်း&oldid=397223" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၁၇ ဧပြီ ၂၀၁၈၊ ၁၄:၀၆ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။